🥇 ▷ taleefanka leh kamarad ficil ku dhisan - - ✅
taleefanka leh kamarad ficil ku dhisan – –
Motorola ayaa si rasmi ah u soo gudbisay Motorola One Action. Telefoonku magiciisa wuxuu ka helaa kamarad ficil ama “cam cam action” oo ay ka mid yihiin. Kaamirada ficilku waxay bixisaa astaamaha muhiimka ah ee aan ka heli karno kamarad ficil dijitaal oo caadi ah, maadaama ay ku jirto muraayad 117 ° xagal ballaadhan oo qabsan kara 1080p / 60fps fiidyow.
Faahfaahinta Motorola One Action iyo astaamaha
Motorola One Action waxaa lagu sameeyay gudaha polycarbonate oo leh aagga hore ee galaaska. shaashad 6.3 inji IPS LCD leh xallin Buuxa HD + 1080p. Waxay leedahay sare 21: 9 saamiga saamiga. Shaashadda waa wareertay, Iyadoo god (of size cajiib ah) ee geeska bidix ee sare in guryo ah 12MP kamarad
Qalabka wuxuu la shaqeeyaa chipset Samsung Exynos 9609. Way raaceen 4 GB oo RAM ah oo ay la socdaan 128 GB oo kaydinta gudaha ah La Faafi karo, adoo adeegsanaya MicroSD. Wuxuu la imanayaa IPX2 qiimeynta biyuhu, oo macnaheedu yahay inaad leedahay ilaalin ka hortagga biyaha daadanaya marka la jiido 15 °.
Waxay leedahay a 3,500 mAh awoodda bateriga in lagu rakibay USB-C Waxa xiiso leh, aaladda ayaa kaliya taageerta 10W qiimaha degdegga ah ee caadiga ah. Waxaan gali doonnaa a Jaakada maqalka, oo lagu daray chiC chip ah. Waxa kale oo jira a qalabka dareenka sawirka faraha kaas oo ku dhegan astaanta Motorola
Kaamirada Action ama cam cam
Aaladda waxaa ku jira qaabeynta kamarad saddex-gees ah xagga dambe. Tani waa meesha aan ku haysan doonno kamarad ficil, waa halka ugu weyn ee lagu iibiyo. Tani waa a 16MP dareeme maxaad isticmaashaa 4 ka mid ah 1 pixel fusion si loo wanaajiyo tayada muuqaalka iftiinka hooseeya. Dareemahu sidoo kale wuxuu leeyahay xasilinta sawirka elektiroonigga ah EIS. Qalabka 16MP wuxuu ku jiheeyaa qaab sidaas ah duubo fiidiyowga toosan markii taleefanka uu taagan yahay. Tani waxay fududayn doontaa taleefanka kor u dhig qalcadaha, maadaama, tusaale ahaan, inta badan baaskiilku taaganyahay taleefanka mid toosan. Dareemahan Looma adeegsan karo in sawirro laga qaado.
Sawir qaade iyo fiidiyow caadi ah
Sawirro joogto ah iyo fiidiyowyo, waxaa jira c12MP kamarad weyn oo duubi kara 4k vidiyo 30 fps. Dareenka saddexaad waa a 5MP baare qoto dheer.
Nidaamka, astaamaha kale iyo qiimaha
Qalabka maamulo Android 9.0 Pie sida nidaamka hawlgalka waana qayb barnaamijka ka mid ah Android Mid Waxay leedahay tikniyoolajiyadda Dolby Audio si kor loogu qaado wax soo saarka dhawaaqa labadaba dhagaha dhegaha (ka faa’iideysiga jaakadda maqalka) sida per hadalkaaga Sanduuq Waxaa ka mid ah dhagaha dhagaha iyo kiis ilaalin oo la xoojiyey.
Tallaabada Motorola One waxay leedahay a qiimaha 260 euro (qiyaastii $ 288). Telefoonka waxaa laga heli karaa Yurub, Brazil iyo Mexico ilaa iyo haddaama. Inta lagu guda jiro bilaha soo socda way gaari doontaa dalalka kale ee Yurub iyo Latin Ameerika. Sidoo kale si Mareykanka iyo Kanada bilowga Oktoobar. Waxay ku timaadaa laba midab: Denim Blue iyo Pearl White.